अमेरिकी र्यापर स्नूप डग एमिनेममा स्विंग गर्दछ - टिल्स रिले
जबकि एमिनम इतिहासको सब भन्दा राम्रो रैपर्स मानिन्छ, स्नूप डगले त्यस्तो सोच्दैन! जिन र जुसको दोभाषेको लागि, डेट्रोइटबाट रैपर शीर्ष १० मा पनि छैनन्!
यो ब्रेकफास्ट क्लबसँगको एक अन्तर्वार्ताको क्रममा थियो कि डा। ड्रेकाको पूर्व नाटकले आफ्नो राय प्रकट गरे, एक अन्तर्वार्ताकर्ताले भने कि उनका निर्मातालाई धन्यवाद, इमेनिम १० भन्दा बढी व्यक्तिमध्ये बढेका थिए। ईतिहासमा उत्कृष्ट रैपर्स
“मलाई त्यस्तो लाग्दैन, तर तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ उहाँ शीर्ष दस गीतकारहरूमा एक हुनुहुन्छ। यो केवल कि उहाँ डा। ड्रेसँग हुनुहुन्छ, र कि डा। ड्रेले उसलाई सर्वश्रेष्ठ इमेनिम हुन उनी मद्दत गरेको छ। त्यहाँ सन् १ 1980 s० को दशकमा साथीहरू छन् जसले एमेनलाई ओभरटेक गरे। जस्तै रकम, बिग ड्याडी केन, KRS-One, LL Cool J, Ice Cube। यो त्यस्तै हो। तर एमिनम अन्त्यमा पुगे, र ऊ अझै साथी, भाई हो ”, अनावरण गरिएको स्नूप डग, NME द्वारा उद्धृत।
यो लेख पहिलो पटक देखा पर्‍यो: https://afriqueshowbiz.com/snoop-dogg-le-rappeur-americain-balance-sur-eminem/